သငျသညျအစဉျအမွဲယနေ့အမျိုးမျိုးသောလူကြိုက်များပြိုင်ကားတီထွင်တဲ့သူစဉ်းစားဖူးပါသလော စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာ, ညာ? ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိကြသည့်အတွက် form မှာ - - ကောင်းစွာ, အခြို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်များအားဖြင့်ရှေ့ပြေးသင်ကသို့ delve ရန်စတင်သောအခါအအားကစားအချို့အမျိုးအစားများ၏အသွင်အပြင်ကြောင့်, ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်!
ဘိလိယက်သို့မဟုတ်ရေကူးကန်များတွင်ပထမဦးဆုံးအပြင်မှာကစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းခေတ်သစ် croquet ရန်အလွန်ဆင်တူခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းမြောက်ပိုင်းဥရောပနှင့်ပြင်သစ်တွင်ဘုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်အကြာတွင်ရေကူးကန်အခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ - ထိုဘောလုံးမြက်ပင်ပုံဆောင်တဲ့, အထူးအစိမ်းရောင်အဖုံးနှင့်အတူစားပွဲပေါ်မောင်းလာတယ်။ အစား cue ၏, ပထမဦးဆုံး mace ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြီးဦးခေါင်းသုံးစွဲဖို့လည်းမသက်မသာကြောင့်ထိုအခါမူကား၎င်းတို့သည်ပိုမိုကြော့တစ်ခုခုမှပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ XVII ရာစုအထိဘောလုံးကိုဂိမ်းတစ်ခုသာမန်ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားပေမယ့်အစားနည်းနည်းနျဌာနခှဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးသည်အထိခရစ်ကက်, ထို XIX ရာစုသည်အထိတိုးတက်ဘူး, နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများတိုးတက်လာဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။
အမေရိကန်ရိုးရာဂိမ်း။ ဒါဟာ Algonquin အဘိဓါန်အနွယ်တည်းဟူသောကိုယ်စားလှယ်များကစားရန်စတင်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဟော်ရေ 100 တထောင် 100 လူတွေတက်ရောက်ခဲ့သည့်အရေးပါသောအဖြစ်အပျက်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးကိုလက်ဖြင့်တို့ထိမရနိုငျ: အဆိုပါစည်းမျဉ်းထို့နောက်တစ်ဦးတည်းသာအရာ operated ။ ပြင်သစ်၏ခေတ်သစ်အမည်မတော်တဆမှုသည်ဤပွဲစဉ်များထဲမှမျက်မြင်သူဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ရှေးဟောင်းအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏လက်ထက်၌အမြစ်များ၏သမိုင်း။ မူလကဂိမ်းရိုးရှင်းစွာကိုခေါ်ခဲ့သည် - ရက်ကက်။ အဆိုပါ 1600 ခုနှစ်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်မှာကစားသမားရိုးရိုးကမြေပေါ်သို့မကျပါစေ VOLANCHIK ရိုက်နှက်နှင့်မရန်ရှိသည်။ အားကစားတက်ကြွစွာဗြိတိသျှသိမ်းပိုက်ထားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်တောင် - ဤတွင်သစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ခေတ်သစ်နာမကိုအမှီရှိပါတယ်။
"လူတွေက" ဘောလုံးအလယ်ခေတ်ကာလ၌ရေပန်းစားခဲ့သည်။ ဒါဟာမကြာခဏအိမ်နီးချင်းကျေးရွာပေါင်းကစားနေသည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်အားရှိသည်, အစားဘောလုံးကို၏နိုင်ကြောင်းပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူငွေဖောင်းပွမှုမှာဝက်ဆီးအိမ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒီဂိမ်း6ရာစုဘီစီထင်ရှား။ , သို့သျောလညျး, ထို့နောက်သူကဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အစားမြင်းလေ့ကျင့်။ ပွဲစဉ်အတွင်းစစ်သားများမြင်းစီး Mini-စစ်တိုက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကျော်, ကို "ပျော်စရာ" ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ သူမသည်ကမ္ဘာတွင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုသိမ်းပိုက်အိန္ဒိယရောက်ရှိသည့်အခါကဗြိတိသျှအရာရှိများသူမ၏ပစ္စုပ္ပန်အမည်ဖြင့်မှတက် လာ. , - ထိုဘာသာစကား Balti မှာ "ဝါးတားပိုလို" ကိုဆိုလိုသည် "ဘောလုံးကို။ "
၎င်း၏အမြစ်များရှေးခေတ်အီဂျစ်၏အချိန်ပြန်သွားပါ။ အားကစား၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းဂျာမနီမှာမွေးဖွားတစ်ချိန်ကဘာသာရေးအခမ်းအနားခဲ့ပါတယ်။ ပါမယ်အပြစ်များရှင်းလင်းတံသင်အသင်းသားတွေကိုချခေါက်။
အဆိုပါ 50s အတွက်ကာလီဖိုးနီးယား surfers တကယ်မြေပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ဘုတ်အဖွဲ့ရွှေ့ချင်တယ်။ ထိုအခါစကိတ်စီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ နက်နဲသောအရာတခုကို - ဒါကခေတ်သစ်ဘုတ်အဖွဲ့ရေးသားသူသောသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Up ကို 80 အားကစားအထူးသဖြင့်လူကြိုက်မများသော်လည်း, နောက်ဆုံးမှာမကြုံစဖူးအထွဋ်မှထ။
မူလကဂိမ်း "mintonet" ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏တီထွင်သူ 1895 ခုနှစ်တွင်ဝီလျံမော်ဂန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတကယ်ဘတ်စကက်ဘော, ဘေ့စ်ဘော, လက်ပစ်ဘောလုံးနှင့်တင်းနစ်အရောအနှောအချို့ကိုမျိုးလုပ်စေချင်တယ်။ အစပိုင်းမှာလျှပ်စစ်လိုင်းအရှည်သာ 1.8 မီတာဖြစ်ပြီး, ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသူတဦးကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို 1928 သည်အထိရှိခဲ့သည်။
အစောပိုင်း 1800 ခုနှစ်, Mi'kmaq အဘိဓါန်အင်ဒီးယန်းတစ်ချောင်းကိုနှင့်သစ်သား၏သေးငယ်တဲ့ဘလောက်သုံးပြီးဟော်ကီကစားခဲ့ပါတယ်။ ကနေဒါတစ်လွှားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသစ်တစ်ခုအားကစားစိတ်ဝင်စားလူတွေ။ ဂိမ်းကလူ 30 အထိသွားနိုင်တစ်ချိန်တည်း, နှင့် "puck" မှာကျနော်တို့ကရေခဲပေါ်မှာကိုယ်သိသောအရာကိုဖြစ်လာပြီးတော့ရေခဲသို့ froze ပါဘူးနေစဉ်။
လက်ပစ်ဘောလုံး၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခြင်း 600 ဘီစီမှစတငျ။ အနည်းငယ်အကြာမှာတော့လက်ပစ်ဘောလုံးဟာ offseason အတွက်ဘောလုံးကစားသမားများလေ့ကျင့်ရေးတစ်ပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်။ သာ 1917 ခုနှစ်, ဂိမ်းသီးခြားအားကစားဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 1972 အတွက်ပထမဦးဆုံးအိုလံပစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ Cro-Magnon ခေတ်၏အပိုငျးအကြားတွင်နေဆဲဖြစ်သောတစ်ဦးရှေးခေတ်အားကစား, ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်တက်ကြွစွာနော်ဝေစစ်တပ်မြန်ဆန်ခရီးသွားအဘို့ထိုသူတို့သုံးစွဲဖို့စတင်တဲ့အခါမှသာ 1760s စတင်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ စီးနှင့်အတူအပြိုင်အတွက်သူတို့ရန်သူများကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမဦးဆုံး 1924 ခုနှစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာထငျရှားသော, အဘီယက်သလွန်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒါကအားကစား 1968 ခုနှစ်တွင်ယောလငွေအားဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်ကျောင်းသားအုပ်စုနှစ်စုပါဝင်ခဲ့ရသောပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ 1970 ကြိမ်မြောက်အားဖြင့်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများစာရင်းတိုးလာနှင့် 1972 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ် Rutgers နှင့် Princeton တက္ကသိုလ်ကစားခဲ့သည်။
ဒါဟာဂေါက်သီးစကော့တလန်အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ပေမယ့်အတော်လေးဟုတ်မှန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ တုတ်များနှင့်ဘောလုံးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်လို့အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုရုံသာစကော့တလန်ဗားရှင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာပြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို - နှင့်သံမဏိအမာခံ - အလှည့်၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်သေးငယ်တဲ့အပေါက်တစ်ခုဘောလုံးကိုပစ်ရန်။
လူတွေနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့စတင်ခဲ့ပါပြီလက်သီးဆက်ဆံရေးထွက်ရှာတွေ့သောကြောင့်, ဤအရှိဆုံးရှေးခေတ်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်အကြာမှာသူကလက်ဝှေ့လက်အိတ်နှင့်ခမောက်ပေါ်တွင်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟေလသလူကဒီအားကစားအန္တရာယ်အရှိဆုံးတဦးယုံကြည်သည်နှင့်မကြာခဏကပြောပါတယ် "အသွေးနှင့်ရရှိခဲ့သည်လက်ဝှေ့သမားအနိုင်ရရှိမှု။ "
16. ဖော်မြူလာ 1
ယှဉ်ပြိုင်ဖျက်သိမ်းခံရဖို့ကြောင့်ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲတွင်တစ်ဦးတည်းသာပါဝင်သူ, 1887 ခုနှစ်သို့ရောက်ကြ၏။ ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သောယှဉ်ပြိုင်ဆုရရှိသူတွင် 17 km / h ထက်မပိုတဲ့မြန်နှုန်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
တင်းနစ်၏မူလအစအကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငြင်းခုန်ခဲ့တယျ။ ဒီအားကစား၏ဘိုးဘေးတစ်ဗိုလ်မှူး Walter Clopton Wingfield ကြောင်းယုံကြည်သော်လည်း, ဂိမ်းအများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောသည်ထင်ရှားကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတွေအများကြီးရှိသေး၏။ အမေရိကန်တင်းနစ်အသင်းမှ 1881 ကတည်းကတည်ရှိခဲ့သည်။
18. Disc ဂေါက်ကွင်း
တကယ့်အားကစားဒီဂိမ်းအောင်၏စိတ်ကူး 1965 ခုနှစ်တွင်ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်အပြီးအဲဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုအချို့ဖြစ်ရပ်များမပြောဘဲနေကြ၏။ သာ 1975 ခုနှစ်, disc ကိုဂေါက်သီး Frisbee အတွက်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အမိမြေဂိမ်း - သူမက 200 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသည်ထင်ရှားရှိရာအာဖရိက, ။ ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကြီးမားကျယ်ပြကျောက်သားထဲသို့ချပစ်လေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူလကအားကစားအလွန်အန္တရာယ်များသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ဦးပြုတ်ကျလျှင်ပြိုင်ဘက်ကျောက်ခဲတို့ကိုပိုပြီးတက်ကြွနေကြသည်ပစ်စတင်စဉ်အပေါငျးအသငျးမြား, မိမိကာကွယ်ရေးဖို့အလျင်စလိုခဲ့ရသည်။
ဒါကအားကစားနည်းနည်းဟော်ကီနှင့်တူ၏, ဒါပေမယ့်သာစကိတ်စီးခြင်းဝတ်ထားမဟုတ် brumbolisty, ဒါပေမယ့်အစားဘောလုံးကိုအဝတ်လျှော်ရှင်းပြီ။ ဒါဟာကစားပွဲကနေဒါအစပြုသည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူမမင်နီဆိုတာမှရတယ်။ ပထမဦးဆုံးအရာရှိတဦးကချန်ပီယံ 1966 ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ဒါပေမယ့်ဘတ်စကက်ဘောကျောင်းသားများကို gyms အတွက်ဆောင်းတွင်းလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်ဆုံးရှုံးကြဘူးကြောင်းသေချာစေရန် 1881 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနည်းပြဆရာဂျိမ်းစ်နိုက်စမစ်ကတီထွင်ခဲ့သည်။ သူကငါ, သင့်ဒေသခံတံခါးစောင့်အနေဖြင့်ခြင်းတောင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲကို ယူ. အမြင့်မှာသူတို့ကိုဆွဲထားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတက် လာ. , ရပ်ဂ်ဘီ, ဟော်, ဘောလုံး၏ဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်တဲ့ဂိမ်းအတူတက်ရောက်လေ၏။ အဆိုပါတီထွင်မှုယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်နေထွက်လှည့်ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာကမ္ဘာတဝှမ်းပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဘတ်စကက်ဘော၏စည်းမျဉ်းများ, နိုက်စမစ်ကိုတီထွင်နီးပါးပြောင်းလဲမှုများကိုခံဘူး။
သုံးထောင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းပိုလီနီးရှားမှာရှိတဲ့ကအစပြုနောက်ထပ် "ရှေးခေတ်" အားကစား။ တံငါသည်ကအသုံးပြုပျဉ်ပြား - သူတို့ငါးဖမ်း၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပြီးနောက်ကမ်းရလို့ပဲ။
ရပ်ဂ်ဘီနှင့်ဘောလုံး၏အရောအနှော XIX ရာစုအတွင်းအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များအတွက်ထင်ရှား။ , အားကစားအတွက် Interuniversity ဘောလုံးအသင်းမှညွှန်ကြားတဲ့သူ Walter ဟာစခန်းကမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရ "စိတ်ထဲစေရန်" နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတူတက်ရောက်လေ၏။
အချိန်ကြာမြင့်စွာကအာဗနာသည် Doubleday ဘေ့စ်ဘောတီထွင်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဂိမ်းအများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော လာ. , သူမ၏ကလေးများနှင့်အတူတက်ရောက်လေ၏။ နယူးယောက် Knickerbockers ဘေ့စဘောကလပ် 1845 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အလက်ဇန်းဒါးယောဟနျသ Cartwright စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အားကစား၏သမိုင်းထက် ပို. နှစ်ပေါင်း 100 ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် "ဘောလုံးကိုကန်" လူတွေအများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောစတင်ခဲ့ပြီယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိ။ တတိယရာစုဘီစီမှာတရုတ်စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များကအမှန်တကယ်အမွေးအတောင်တွေနဲ့ကျပ်တစ်ဘောလုံးကိုခဲ့သည့်ဘောလုံးကို, ကစားခဲ့ကြသည်။ ကစားသမားများမိမိလက်နှင့်ကိုယ်တော်တိုင်ကူညီခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး "TSU Chu က" မခေါ်နိုင်ဘူး။
28 ဓာတ်ပုံများ, ကြောင်းကိုယ်အလေးချိန်ဖေါ်ပြခြင်း - တစ်မိုက်မဲစိတ်ကူး
သူတို့ညမှာရှိပါတယ်ပင်လျှင်, ပုံတွင်ထင်ဟပ်မရှိကြသည့် 20 ထုတ်ကုန်,
အဆိုပါရီယို 2016 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအများစုမှာမော်ကွန်းဓာတ်ပုံကို
တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းရှေ့မှာစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြောင်း 11 အစားအစာများ
ခေတ်သစ်ကာလ၏ 10 အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်အပြေးသမား
တစ်ဦး detox အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ 13 အမြန်ရေစာ
နေ့တိုင်း, ထိုငှက်ပျောအပေါ် စား. , ကသင့်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်!
သငျသညျကိုယ်အလေးချိန်မနိုင်အဘယ်ကြောင့် 20 အကြောင်းရင်းများ
စကိတ်စီးခြင်းမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးမရနိုငျသောအသက် 30 ရယ်စရာသက်သေအထောက်အထား!
နာတာရှည်အစာအိမ်နဲ့ - လက္ခဏာများ, ကုသ
နှစ်ပေါင်း 50 အဘို့အကြှနျုပျ၏မိခင်လက်ဆောင်
အသားမပါဘဲဟင်းချို - အရသာချက်ပြုတ်နည်းများရိုးရှင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာများနေ့တိုင်း
သစ်တော်သီး "Duchess" - မျိုးစုံ၏ဖော်ပြချက်
ခွေး chihuahua မိန်းကလေးအမည်ဝှက်
မင်းသမီး Shannen ဒိုဟာဆီ, ရန်ပွဲကင်ဆာ, ဝင်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!